XOG XASAASI AH: Maxaa ka soo baxay shir deg deg ah oo dhex maray Jawaari iyo 90 Xildhibaan oo qabsoomay ? – Puntlandtimes
XOG XASAASI AH: Maxaa ka soo baxay shir deg deg ah oo dhex maray Jawaari iyo 90 Xildhibaan oo qabsoomay ?
December 17, 2017 Wariye
MUQDISHO(P-TIMES)-Shir xildhibaanada golaha shacabka oo boqol ku dhow iyo guddoomiyahooda Prof. Jawaari ayaa soo idlaaday saacad ka hor, ayadoo si adag looga doday weerarka abaabulan ee xildhibaanada iyo barlamaankaba ku socda ee uu ugu danbeeyey warkii Gefka ahaa ee Axmed Cali Daahir.
Shir kale oo ballaaran ayaa berito loo ballamay, waxaana isku dareen laga wada ahaa hanjabaadaha, cagajiglaynta iyo xukun ku rididda waayadan danbe ku wajahnayd ee gadaal ay ka riixayeen madaxda sare ee dalka iyo xafiisyadooda taasoo lagu beegsanayey Xildhibaanada ka aragti duwan madaxda dalka ama aan ku qanacsanayn qaabka ay wax u wadaan.
Axmed Cali Daahir wuxuu ka shaqeynayay Ethiopia markii aan dalkaan samata bixintiisa aan ku hawlannayn, warka ka soo yeereyna waxaa muuqata inuu uga gol lahaa in dawladnimada Soomaaliya ee soo kabanaysay lagu majaxaaboyo.
Cid qarankaan u soo dhibaatootay, kana tirsan hey’adaha qaranka inuu ku tilmaamo qaran dumis asagaoo sharci-darro ku jooga xafiiska waa arrin aan loo dulqaadanayn, wuxuuna u eg yahay nin waxa uu ka shaqeynayay iyo dalkaanba aan aqoon u lahayn.